Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo faahfaahiyay xaaladda maxaabiista Soomaalida ee ku xirxiran dalalka caalamka | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo faahfaahiyay xaaladda maxaabiista Soomaalida ee ku xirxiran...
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo faahfaahiyay xaaladda maxaabiista Soomaalida ee ku xirxiran dalalka caalamka
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyay ku howlaneyd olole lagu dalbayo in ay Dowladdu u istaagto sii deynta dhallinyaro Soomaaliyeed ee ku jira xabsiyada dalal shisheeye, taas oo loo arko, ahna waajib Dowladda saaran.
War qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska Wasiirka Arrimaha dibadda Ee Soomaaliya Mudane Yuusuf Garaad Cumar ayaa lagu yiri “Maaddaama uu ololuhu sii xoogeysanayo, mararka qaarkoodna ay ka hadlayaan
dhinacyo aan ahayn xog ogaal buuxa, ayaan goostay in aan soo bandhigo xogta hadda suurta-galka ah in aan la wadaago dadweynaha. Waa dadaal ay waddo Dowladda Soomaaliya laakiin aan weli la soo geba gebeyn”
Waxaan shacabka ku wargelinayaa in aan billownay xiriirro dhowr ah oo ku saabsan dhallinyaro ku xiran dalalka Ethiopia, Sychelles iyo India.
Seychelles Wasiiru Dowlaheeda Arrimaha Dibadda ayaan ku kulannay mid ka mid ah shan shir doceed oo aan gooni gooni ula yeeshay Wasiirro Arrimo Dibadeed isla halkii maalin ee shirka London uu socday.
Wasiiru Dowlaha Arrimaha Dibadda ee Sychelles arrinta ugu weyn ee uu ila soo qaaday waxay ahayd nabadgelyada badda nooo dhexeysa iyo wadashaqeynteenna mustaqbalka. Ka dib markii aan uga warramay isbeddelka dalka ka dhacay, Aniguna arrinta ugu weyn ee aan ku soo qaaday waxay ahayd Maxaabbiis Soomaali ah oo ku xiran Seychelles.
India waxaa ay Safaaradda Soomaaliyeed ee New Delhi iyo Xeer Ilaalinta Qaranku ay qabteen Qareen u dooda mid kasta oo ka mid ah Maxaabbiista Soomaaliyeed ee ku jira xabsi ku yaalla Mumbai. Safaaradda Soomaaliya waxaa kale oo ay u asteysay mid ka mid ah Diblomaasiyiinteedu in uu tago Mumbai 1400 km u jirta New Delhi mar kasta oo Maxkamad la soo taagayo mid ka mid ah boqol iyo dheeraadka Maxaabbiista Soomaaliyeed ah.
Dowladda Soomaaliya waxa ay hadda ku dabajirtaa Soomaali ku xiran dalalka Uganda, Sudan, Libya iyo meelo kale oo ay ka mid yihiin dalal ku yaalla Afrikada Koofureed.
Previous articleXidigle Xoogga Dalka Faisa Cabdirashid oo kaalmo gaarsiisay Naafada Xoogga ee ku jira isbitaalka Martini
Next articleMadaxweynaha JFS oo Guddi soo qiimeeya u saaray Maxaabiista Xabsiga Dhexe